Fireboy sy Watergirl lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Fireboy sy Watergirl lalao
Ny maro loko, mampientam-po an-tserasera Ny afo sy ny rano lalao nalaza avy hatrany raha vao niseho. Milalao na dia olon-dehibe izy ireo, hamaha Puzzles sady hiantra ambaratonga. Dia ilaina ny manana minitra maimaim-poana, toy ny eritreritra ny ho "afaka ny hilalao any amin'ny iray amin'ireo andian-dahatsoratra." Misy toerana vitsivitsy mba handeha sy ny rano indray mitete avy amin'ny pitik'afo. Dia nitsidika fiangonana isan-karazany dia hahita kristaly, dia hanokatra ny varavarana ho amin'ny ambaratonga manaraka ary hanohy ny dia. Fa noho izany dia mila mitady fomba mba hitsangana ho amin'ny ambony sehatra, misintona ny enta-mavesatra ary tsy ny voka-dratsin'ny asidra fanapoizinana farihy, rindrina ny afo sy ny rano.
Fireboy & Watergirl tao amin'ny Tempolin'ny Ala
Fireboy sy Watergirl: The Temple Light
Fireboy sy watergirl mpilalao telo
Survival ny nosy Fireboy Watergirl 2
Lava zazalahy sy zazavavy manga
Fireboy sy Watergirl Back Home
Fireboy Watergirl Ao amin'ny Dino World
Flameboy sy Aquagirl The Magic Temple
Bola basikety sy rano 4
FireBoy sy WaterGirl Mandehana
Fireball sy Waterball Adventure 4
Ady afo vs rano
Tempolin'ny afo sy Mountain Ice
Fireboy Watergirl Ao amin'ny Zombies World
Fireboy & Watergirl ao amin'ny Tempolin'i Ice
Ala zazavavy sy ala zazakely afo
Ny rahalahiko: The Magic Temple
Ny afo sy ny Rano 1: Ao amin'ny ala tempoly
Ny afo sy ny Rano 2: The Light Tempoly
Lalao Ny afo sy ny Rano tamin'ny Category:
Games nandritra ny telo
Farany Fireboy sy Watergirl lalao
Lalao Online Rehetra Fireboy sy Watergirl lalao
Play ny lalao afo sy ny rano amin'ny namanao
Game 4 afo sy ny rano - Ohatra voalohany ny tena zava-dehibe ny hevitry ny fiaraha-mientana ifampizarana fanampiana, fisakaizana ary matoky. Na izany aza, azo atao:
horonan-taratasy hay resena an-tendrombohitra,
mba milomano ny ranomasimbe midadasika,
mba handresy ny tsy fantatra elanelana, halalin'ny sy ny hahavony.
Na dia izany aza, ny zava-drehetra eo amin'ny sorony na fahoriana, na mitaona Mizara amin'ny tapany. Raha misy olona ao amin'ny fahoriana, ny faharoa tokoa hahita ny lalana avy amin'ny toe-javatra mampidi-doza. Na dia ny traikefa nahafinaritra lasa mahafinaritra sy manaitra kokoa rehefa manana olona mba hizara ny mahafinaritra. Manasa anao izahay milalao afo sy ny rano an-tserasera, izay fanaraha-maso atao ato roa litera, ary ny kilalao ho anao ny hivadika ho tena Odyssey ny tempoly fahiny, sy ny maro no fandrika sy loza. Ny rano indray mitete-ankizivavy sy ny ankizilahy dia hamoaka mampidi-doza Misafotofoto sy ambanin'ny tany miaraka fanjakana. Na dia eo aza ny toa mifanohitra natiora toy ny ao amin'ny fiainana ara-dalàna tsy mahazo miara ao amin'ny tontolo virtoaly, dia mahazo teny tsara, ary dia ohatra fa raha tianao afaka antsika foana noho ny marimaritra iraisana, ary miara-miasa.
Ho traikefa nahafinaritra tsy mampino ambaratonga maro ny lalao afo sy ny rano 2. Raha anoloan'ny lainga ny farihy ianao, aoka ny droplet dia mifindra any am-pitan'ny ny tetezana sy ny mpiara-miasa rendrika azy ary afaka tanteraka ny sakana. Tamin'ny fotoana hafa indray, nisy manda afo dia ho sakana ho an'ny zazavavy ary avy eo dia tonga ny fanavotana ny zatovo an'ny loza voajanahary io. Oh, dia mety hahita ny fomba hanampiana ny namany tsy mba handoro ny tenanao. Fa ny vato misakana tsy foana araka ny natiora. Loza ho tafiditry ny fahavalo izany voaloboka, zava-maniry misy poizina, asidra dobo, spikes sy ny vato ny vato no sakana ho mitovy olana ho an'ny mpiara-miasa. Fa mba hiatrika azy ireo irery no mety ho miaraka. Raha manao zavatra toy ny mahery fo eo amin'ny farany ambany, ny faharoa dia tsy maintsy mananika ka hihazakazaka amin'ny rafitra sasany kosa manao. Nampiasa levers, dia afaka nosoratan'i ny sehatra hanandratra, tetezana, atraka vato vato ary manala ny septum. Mandalo Misafotofoto, hanangona kristaly izay mahazo an-dalana, fa ny tena remby - maitso vato izay manokatra ny andalan-tsoratra masina ho any amin'ny dingana manaraka ny lalao. Rehefa eo an-tananareo, mifindra mankany amin'ny varavarana teo an-tampon'ny piramida sy ny mitodi-doha mankany amin'ny niainany vaovao.
Ny toerana tena lalao dia momba anareo mandrakariva
ny lalao dia lasa malaza ary matetika hita eo amin'ny tsy Monitors solosaina ihany, fa koa finday na ny takela-bato. Rehefa tsara ny vokatra, dia tena tonga amin'ny fitohizan'ny ary izany no tsy misy afa-tsy. Hiatrika ny fihetseham-po ny zava-nitranga ny ampahany voalohany, dia efa foana amin'ny vaovao ravaka. Ny dingan'ny ny lalao afo sy ny Rano 3 manolotra anao ny midadasika ny ranomandry Temple, izay ny zava-drehetra dia nodi-mandry rihana mivaingan'ny hatsiaka, manarona, izay manana mihitsy lasa sakana fanampiny. Raha teo aloha manda mianika an'ilay fiakarana, be dia somary mora, fa ankehitriny dia tsy maintsy mieritreritra ny fomba hanaovana izany. Fahazavana dia matetika no tsy ampy ihany koa ary toy izany koa fahazavana ny lalana, tsy maintsy ho marani-tsaina. Rehefa avy nahita ny fahiny fanilo tao an-johy, dia tsy maintsy mbola ho afaka ny mazava. Saingy tsy manome fahazavana betsaka hahita ny toerana rehetra manodidina. Nandrakotra fotsiny ampahany kely an-dalana, dia manafina mampidi-doza ny tsy fahombiazana ary afaka mora foana mikisaka ho azy ka hivadika. Fomba mahavariana fandrika sy hafahafa rafitra, koa, dia tsy nandeha ary vao hahalala ny fomba fampiasana azy. Raha lalao ireo dia natao ho an'ny olona roa, fa na dia mpilalao iray very tanteraka ny fanaraha-maso fotsiny ny fitantanana isan-toetra amam-panahy amin'ny fotoana. Izany Walker amin'ny lojika fitongilanana dia tsy Polonia ny mpihaino ihany ny ankizy, fa voasambotra sy olon-dehibe Gamers, ka mahatonga azy io ho zavatra maro isan-karazany ny fialam-boly ny taranaka fara mandimby.
Ny faharoa Wind
Angamba tsy ho ela ny olona dia handeha hiresaka amin'ny endrika vaovao. Ohatra, ny mpiara-fikorianan'ny solosaina lalao. Lalao izay endri-javatra io no misy, efa misy amin'ny roa mpitifitra sarotra sy ny kely saina fleshek endrika. Ohatra, ny afo sy ny rano lalao mahafinaritra mahatonga ny roa tonta. Afaka milalao ho an'ny iray amin'ireo endri-tsoratra roa voalaza ao amin'ny lohateny lalao, miaraka mandalo ambaratonga aorian'ny ambaratonga. Samy manana ny fanaraha-maso misaraka. Izy ireo dia any amin'ny mifanohitra faran 'ny keyboard, ka ny afo sy ny rano ny lalao no tena tsara mifanaraka mba hahazo aina ao aminy hilalao miaraka. Ny karazana dia - iray mahazatra Walker amin'ny endri-javatra rehetra, ny toetra. Ny teboka Tsotra - mandeha amin'ny Misafotofoto, manangona rakitry ny ela sy fandresena vato misakana. Rehetra - ny. Rano contraindicated latsaka ao amin'ny lavaka afo. A afo, tsirairay avy, ao amin'ny farihy kely. Raha toa ka tsy afaka mitsambikina eo aminy - manomboka ny sehatra indray. Ary ny fahadisoan'ny iray amin'ireo mpilalao voakasiky ny faharoa - izy, koa, dia tsy maintsy hamerina ny andalan-teny indray.
ity lalao ity no tena malaza ao amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny ankizy, ohatra, roa, ary ny anankiray ny solosaina. Rahalahy sy Rahavavy afaka ny ho tonga miaraka ary mahazo miara-milalao tsara io nihevitra-avy platformer. Ary hifaninana mba hahitana hoe iza no hatao eo anivon'ny ny namany Sary www. lalao-lalao. fr. ua. Ny loka dia ho afaka hilalao ny toerana tena lalao. Izay, mifanohitra ho amin'ny andianà Lalao afo sy ny rano, zara raha mahakasika ny fandraisana anjara ny mpilalao roa indray miaraka.